Isithwathwa segazi noma iqhwa elibomvu: sikutshela ukuthi kungani kwenzeka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
U-Emilio Garcia | 19/08/2021 09:30 | Kubuyekezwe ku- 19/08/2021 09:31 | Ukuguquka kwesimo sezulu, Isimo sezulu
Wake walibona iqhwa elinegazi ezinkundleni zokuxhumana noma kunoma iyiphi i-documentary yethelevishini? Uyesaba Ngabe uyitholile inelukuluku lokwazi? Lo mkhuba ubizwa nge- 'Snow Snow' futhi sizokutshela ukuthi kungani lesi senzo esiyinqaba sibizwa kanjani nokuthi kanjani.
Yonke into esizokutshela yona kule ndatshana iqoqwe ezifundweni ezahlukahlukene nasekuthunyelwe kwama-blog okuchaza lo mkhuba. Kepha sesivele silindele ukuthi ngaphezu kwemvelo, kungaba yinto ecasukile. Futhi ungahle uzibuze, kungani? Empeleni, ngokwezifundo, kubonakala ngathi kungenxa yokuguquka kwesimo sezulu. Enye inkomba eyengeziwe yalokho okwenzekayo emhlabeni wethu.
1 Iqhwa Legazi Kuyini ngempela?
2 Ukubonakala kokuqala kwe-Snow Snow
3 Ezinye izenzakalo zokufuna ukwazi: Izinyembezi Ezihlaza
Iqhwa Legazi Kuyini ngempela?
Ukuphendula lokhu, njengoba besikutshelile ngaphambili, kudingeke ukuthi siphenye kwizingosi ezahlukahlukene nasezifundweni zakwamanye amazwe. Kepha sizitholile izimpendulo futhi singakutshela ukuthi liyini i-Blood Snow.
Ngokobuchwepheshe singabiza le nto ngokuthi I-Chlamydomonas nivalis, futhi kusekelwe eqinisweni lokuthi izinhlobo ezahlukahlukene zama-algae aluhlaza, aqukethe umbala ohlukile ngaphakathi kuwo, kufaka phakathi obomvu, enza inqubo ye-photosynthesis futhi ngemuva kwalokho angcolise iqhwa. Ngakho-ke, yilokho-ke, akulona igazi phakathi kweqhwa, akukhona ukuthi noma yisiphi isilwane noma umuntu uye wopha kuso noma yini efana naleyo. Kalula, ngezingcaphuno, ulwelwe.
Kuyiqiniso ukuthi akekho noyedwa oke wahlupheka phezu kweqhwa, nokuthi akufanele sikwesabe, kodwa iqiniso ukuthi yebo kuyinkomba yokuthi kukhona okubi okwenzekayo emhlabeni wethu kanye nemvelo yawo nokuthi kufanele sesatshiswe ezinye izinhlobo zezinto esizidalayo.
Zonke lezi zithombe esizithola zeqhwa elinombala obomvu zivela ezindaweni ezinjenge-Alps, iGreenland noma i-Antarctica uqobo. Kwenzekani-ke kulezi zindawo ukuze kwenzeke lesi simo? ukuthi sifudumeza iplanethi ngaphezu kwalokhu okufanele sikwenze. Lezi zifunda zishiswa ngaphezu kokujwayelekile futhi kube yishwa lakho. Lokhu kubangela ukuncibilika futhi lokho kuncibilika okufanayo yilokho okubonakala kudala ukuthi izimo ezifanele zivele lolu hlobo lwe-algae enombala lukhule.
Ukubonakala kokuqala kwe-Snow Snow
I-Las ukuvela okokuqala kwalesi senzakalo kusukela ku-Aristotle, yebo, njengoba usufundile, emibhalweni yakhe. Lesi simo besilokhu siqhubeka amakhulu noma izinkulungwane zeminyaka lapho phakathi naso sonke sigcine abagibeli abehlukene, abagibeli bezintaba, izazi zemvelo nabanye abantu abadlula ezindaweni ezibandayo kangako ukuthi bafudumale kancane kancane.
Eminyakeni edlule kusukela ngekhulu lesithathu BC, ibilokhu ithola amagama ahlukene, njengeqhwa lekhabe. Bona ukuthi ngabe le nto 'yemvelo' inesikhathi sokuthi yena uqobo IThe Times isivele yabhala ngaye ngoDisemba 4, 1818.
Ukutholwa kwakamuva kungenxa yokaputeni owaqaphela ububomvu obungajwayelekile beqhwa obaphuma ngokuvuka kwakhe. Leli qhwa lenziwe ngezifundo ezahlukahlukene futhi lacutshungulwa ngoba alizange linikeze udumo futhi akekho owakholelwa ukuthi ngesinye isikhathi iqhwa elibomvu noma iqhwa legazi liwile.
Okutholwe kulezi zifundo ezahlukahlukene ezenziwa ngaleso sikhathi ukuthi phakathi nezinyanga zasebusika i I-Chlamydomonas nivalis, eyaziwa ngokuthi yi-Blood Snow, ayisasebenzi ngokuphelele. Kusentwasahlobo ngokwanda kokushisa nokukhanya uqobo lapho iqala ukuqhakaza ngenxa yezakhamzimba ezithola emvelweni, okukhuthaza ulwelwe ukuthi lukwazi ukwanda ngancibilikayo.
Ekugcineni, okubangela lesi simo ukuthi ukuncibilika kuyashesha futhi indawo iya ngokuya ilahlekelwa ukubukeka kwayo, into ethi ezindaweni ezibandayo kanjalo namanzi amaningi afriziwe ingasifaneli nakancane.
Kungani incibilika ngaphambili? ngoba umbala obomvu we-algae onombala ukhombisa ukukhanya okuncane okuvela elangeni ngakho-ke kubangelwa ukuncibilika okusheshayo, ngeshwa kweplanethi. Ekugcineni, akuyona nje into emhlophe eluma umsila wayo nokuthi kunoma yikuphi, iyingozi kwiplanethi yethu ngoba asifuni ukuthi ukuncibilika kukhuphuke futhi kube nolwandle.
Ezinye izenzakalo zokufuna ukwazi: Izinyembezi Ezihlaza
Iplanethi yethu igcwele lolu hlobo lwesimo, ezimweni eziningi (cishe zonke) ezibangelwa ubukhona babantu futhi ukusheshiswa kwesimo sezulu ukuthi nathi sizibangela nsuku zonke ngokunganaki kwethu imvelo nenhlalakahle yayo.
Isibonelo, lokho okubizwa ngokuthi Izinyembezi Ezihlaza okwesibhakabhaka kuvela olwandle lwaseTaiwan. Lezi zinyembezi eziluhlaza okwesibhakabhaka, ngokusho kwemibiko ehlukene eqoqwe endaweni yaseMatsu Islands, abakubangelayo ukukhanya okukhulu okwesibhakabhaka ehlobo. Nakulokhu futhi kungenxa yokuvela kwezimbali ezahlukahlukene, okungukuthi, izidalwa eziphilayo ezahlukile kulokhu ezikwi-bioluminescent futhi ezibizwa ngama-dinoflagellates. Konke lokhu kudonsela izinombolo eziphezulu zabavakashi, esiqinisekisa ukuthi awazi ukuthi lokho kukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka akulutho neze, ngoba inobuthi kakhulu futhi minyaka yonke iyanda kulezi zindawo zaseTaiwan.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Isithwathwa segazi noma iqhwa elibomvu: sikutshela ukuthi kungani kwenzeka